Kolontsaina malagasy : tsy misy fahendrena lany andro izany | NewsMada
Kolontsaina malagasy : tsy misy fahendrena lany andro izany
Iray amin’ireo kolontsaina malagasy voazimbazimba tato ho ato ny fanomezan-kasina ny zokiolona. Ani­san’ny niteraka io fahasimbana io ny fampanjakana ny vola sy ny laza amam-boninahitra. Tsy ny sehatra kely tahaka ny ankohonana ihany no iharan’izany fa hatramin’izay heverina fa goavana indrindra mihitsy aza. Nan­jary tsy fakan-kevitra intsony ny zokiolona. Ambara ho lany andro ny fomba fisainan’izy ireny. Io tranga io no tena zava-doza satria tsy misy fahendrena lany andro izany.
Manamarina izany, ohatra, ny hoe : “tsy azo atao ny mandrora mitsilany”, hoy ny Malagasy. Nanomboka tany amin’ny fotoana niforonany ka mandra-pahalevon’ny ha­ritanan-Janahary, marina sy tsy mety ho lany andro izany io fahendrena malagasy io. Ny zokiolona no manana sy mitahiry ary mahatahiry ire­ny karazam-pahendrena ire­ny.
Manafangaro zavatra ma­ro ny ankehitriny. Anisan’ izany ny atao hoe “fahendrena”, hany ka ireo mahatazona izany indray no toa am­pangain’ny fiarahamonina ho “adala”. Ireo miaina sy milomano ao anatin’ny hadalana indray no mahazo dokadoka fa “hendry”. Diniho ange e!